Iska Illow Kylian Mbappe - Mucjiso Goolasha Saaxiibbo Yihiin Oo Usoo Baxday PSG | Laacibnet.net
HomePSGIska Illow Kylian Mbappe – Mucjiso Goolasha Saaxiibbo Yihiin Oo Usoo Baxday PSG
Iska Illow Kylian Mbappe – Mucjiso Goolasha Saaxiibbo Yihiin Oo Usoo Baxday PSG
Kylian Mbappe ayaa ahaa xiddigii PSG ay da’yaraanta kaga soo bixisay lacagta badan ee haddana noqday mid ka mid ah weeraryahannada iyo xiddigaha ugu wanaagsan dunida, laakiin waxa jira mucjiso yar oo kale oo usoo baxday oo iyadoo aanay dadkuba aqoon u lahayn ay ku war heleen goolashiisa waallida ah.
Kooxda reer France oo haysata Neymar, Mbappe, Di Maria iyo Icardi oo ah laacibiinta goolasha ay ka hesho, ayaa waxay sugayaan laacib kale oo mustaqbal weyn leh, isla markaana rikoodhkiisa goolashu uu ka badan yahay xiddigaha kale ee ay haystaan.
Waa 19 jir amaah ugu maqan kooxda Lens, waxaana laba sannadood gudahood uu dhaliyey 60 gool iyadoo waliba aanu xili ciyaareedkiisii labaad dhamaysanin.
Arnaud Kalimuendo oo kasoo baxay kulliyadda da’yarta PGS ayaan wali fagaareyaasha waaweyn lagu arag, walina ma suurtogelin inuu ka hor yimaaddo kooxdiisa maadaama uu amaah kaga maqan yahay, laakiin labadii xili ciyaareed ee ugu dambeeyey ee 2018-19 iyo 2019-20 ayuu saxeexay 60 gool oo intooda badan ay yihiin horyaalka.
Sagaal ka mid ah goolashaas, waxay waxa uu dhaliyey 10 ciyaarood oo tartanka Champions League ee da’yarta.
Arnaud Kalimuendo ayay PSG qorshaynaysaa inay ka saxeexdo heshiis cusub oo waqti dheer ah si ay uga baaqsato in sidii laba ka mid ah da’yarteeda hibada leh oo kooxdo kale uga wareegay uu isaguna raadkooda raaco.
Laacibkan 19 jirka ah ayaa kooxda uu amaahda kula joogo ee Lens waxa uu ka caawiyey inay usoo dallacdo heerka koowaad, waxaa se ay PSG hore uga sii taxadartay in uu ka hor yimaaddo kooxdiisa iyagoo amaahdiisa ku daray qodob dhigaya in aanu ka hor iman karin.
Afar sannadood oo heshiis ah oo uu sii saxeexay markii amaahda lagu dirayay, ayay PSG doonaysaa inay mar kale kordhiso.
Laacibakn ayaa dhashay January 1, 2002, waxaana uu durba jabiyey rikoodh 70 sannadood soo taagnaa oo gool-dhalinta Lens ah.
Barcelona Oo Guul Soo Laabasho Cajiib Ah Ugu Soo Baxday Semi-finalka, Sevilla Oo Labo Casaan Qaadatay & Pique Oo Badbaadiyay Barca
War Xun & War Wanaagsan Oo Usoo Yeedhay Real Madrid Ka Hor Kulanka Atletico Madrid